Maxaa loo dilayaa Shimbirtan Mareykanka ah ee Australia gashay? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
January 14, 2021 at 14:41 Maxaa loo dilayaa Shimbirtan Mareykanka ah ee Australia gashay?2021-01-14T14:41:23+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Shimbir, nooceedu yahay kuwa ay Soomaalidu u taqaanno “qoolleey xamaam”, oo u safartay waddanka Australia, iyadoo ka tallowday badweynta Pacific, ayaa lagu wadaa in la dilo kaddib markii ay ku xad gudubtay shuruucda adag ee waddankaas uu u sameystay karantiilka.
Waxaa lagu soo warramay in Shimbirtan ay luntay xilli uu tartan ka socday gobolka Oregon ee dalka Mareykanka dabayaaqadii bishii October ee sanadkii lasoo dhaafay. Hase yeeshee, ku dhawaad labo bilood kaddib waqtigaas ayaa lagu arkay gudaha magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Laakiin mas’uuliyiinta Australia waxay sheegeen in shimbirtan, oo lagu magacaabo Joe, ay keeni karto “khatar dhinaca caafimaadka ah” oo waxyeelleyn karta shimbiraha reer Australia.
Sidaas awgeedna, waxaa la go’aansaday in lasoo qabto oo la dilo.
Nin daggan magaalada Melbourne, oo lagu magacaabo Kevin Celli-Bird ayaa sheegay in uu shimbirtan qeybta dambe ee gurigiisa ku arkay 26-kii bishii December.
“Aad buu shimbirku caato u ahaa, sidaas awgeed buskud ayaan u burburiyay bannaanka ayaana u dhigay,” ayuu yidhi isagoo la hadlayay Wakaaladda Wararka ee AP.
Cilmi baaris yar oo uu ka sameeyay internet-ka ayuu Mr Celli-Bird ku ogaaday in shimbirtan, oo uu leeyahay qof daggan gobolka Alabama, markii ugu dambeysay lagu arkay tartan shimbiraha loogu qabtay gobolka galbeedka Mareykanka ku yaalla ee Oregon.
Laakiin markii uu warbaahinta qabsaday warka ku saabsan in shimbirkii Joe ahaa la helay, waxaa Mr Celli-Bird lasoo xiriiray booliska Australia oo sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladda uu abuuri karo xayawaankan.
Wali shimbirtan lama qabanin, laakiin waaxda beeraha, Byaha iyo deegaanka ee dalkaas ayaa sheegtay in ay waxyeello u horseedi karto shimbiraha deegaanka, ayna ku khasban yihiin in ay dilaan.
“Iyadoo aan la eegeynin waddanka ay kasoo jeeddo, shimbir kasta oo aan la marinin shuruucda loogu talagalay xayawaanka dibadda laga keeno iyo tijaabooyinka caafimaad ee loogu talagalay, looma oggola in ay ku dhex noolaato Australia,” ayuu bayaan uu soo saaray ku yidhi afhayeen u hadlay waaxda beeraha, biyaha iyo deegaanka.
“Xalka kaliya ee looga badbaadi karo khatarta caafimaad waa in shimbirtaas la dilo,” ayuu sii raaciyay.
Shimbirta Joe ma aha xayawaankii ugu horreeyay ee dhibaato kula kulma gudaha Australia, ama uu qabto sharciga socdaalka xayawananada.
Jilayaasha kala ah Actors Johnny Depp iyo xaaskiisii xilligaas, Amber Heard, ayaa ku khasbanaaday in ay muuqaal raalligalin ah soo duubaan kaddib markii labo eey oo ay lahaayeen ay sanadkii 2015-kii Australia ku geeyeen diyaaraddooda khaaska ah.
Wali ma cadda sida ay shimbirtan dilka loo qorsheynayo ugu suuragashay in ay ku safarto masaafe dhan 8,000 oo meyl, lagasoo billaabo xeebaha galbeedka Mareykanka ilaa koonfurta Australia, laakiin saraakiishu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in sida ay u badan tahay ay soo raacday markab xamuul waday.
Inkastoo ay suuragal tahay in qaab sharciyeysan shimbiraha lagu geeyo Australia, haddana nidaamka loo marayo ayaa adag oo ay ku bixi kartaa lacag dhan tobannaan kun oo doolar.
Tobannaan sano gudahood ma jirto cid shimbir laga qaaday Mareykanka geysay waddanka Australia.
« Arsenal Oo Wadahadalo La Qaadatay Tababare Premier League Ka Haw Gala, Badalka Arteta Ayay U Arkaan.
Puntland oo guddi Nabadayn ah u dirtay Miyiga degmada Isku-shuban »